दुबई 2019 मा शिक्षण नौकरी को लागि भर्ती
अब हामी दुबईमा जागिर भर्दैछौं
अब हामी दुबईमा जागिर भर्दैछौं। दुबई सिटी कम्पनी तपाईंलाई आफ्नो काम उपलब्धि खोज्न पुग्छ। दुबई सिटी कम्पनीले विदेशमा संयुक्त अरब अमीरातमा रोजगारीका लागि सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्दछ। प्रश्न हो कसरी दुबै दुबईमा नौकरी खोज्न सकिन्छ। वास्तवमा, तपाईलाई संयुक्त अरब अमीरातमा एक नौकरी खोज्नको लागि केही चरणहरू पछ्याउन आवश्यक छ।
जब मान्छे व्यापार को अरब पूंजी को बारे मा सोचते हो। निस्सन्देह, दुबई र अबू धाबी संसारमा आएको छ। यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ क्यारियर खोजीकर्ताहरू स्वचालित रूपमा लिङ्क गर्नुहोस् र दुबई सिटी कर मुक्त मजदूरीको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। दुबई यसको नीयन रोशनी र थोरै क्यारियर विकास उच्च कार्पोरेट स्तरहरु संग। अर्कोतर्फ, दुबई र अबू धाबी कसरी पार्टीको बारेमा थाहा छ। त्यसैले तपाईलाई कडा कर्जा कमाईको बारेमा तपाईलाई चिन्ता पर्दैन।
तपाईं सामान्य कार्यकारी कार्यहरू रिक्त स्थानका लागि व्यवसाय कार्यकर्ता खोज्न सक्नुहुन्छ। यो मनमा संग, तपाइँलाई जरूरी उत्तम खोजी गर्न आवश्यक छ यस्तो क्यारियर खोजी गतिविधिहरूको लागि गन्तव्य। वास्तवमा, यदि तपाइँ लोकप्रिय नौकरी साइटहरू हेर्नुहुन्छ। दुबई सिटी कम्पनी सधैं पहिलो सूचीमा, धेरै कामका साथ आलेख खोज्ने साथ। हामी दुबै स्थानहरु बाट दुबई मा हाम्रो कम्पनी को सर्वश्रेष्ठ नौकरी साइट बनाउन को लागी हो।
दुबईको शहर सधैं संख्यामा रहेको छ भारतीय नौकरी खोज्नेहरूको लागि। धेरै कम्पनीहरूले प्रमुख कार्यालयहरू खोले र अबू धाबीलाई छिटो मन पराउँछन्। यसलाई अर्को तरीकाले अबु धाबीमा रोजगार प्राप्त गर्नु उत्तम कुरा हो सम्भवतः तपाईलाई हुन सक्छ.
युरोपमा अमीरात किन फरक छ?
सबै तरिकाले, त्यहाँ त्यहाँ नियमहरू मध्य पूर्व फरक छ युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका। अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार तपाईं जहाँसुकै विदेशमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ, अमीरातमा मात्र होईन तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंसँग अझै राम्रो तलब छैन। दुबई र अबु धाबी लन्डन वा पेरिस भन्दा फरक छन्। त्यहाँ धेरै छन् एशियाका अन्तर्राष्ट्रिय करियर चाहनेहरू। विशेष गरी भारत र पाकिस्तान बाट।
निस्सन्देह, सबैले क्यारियर खोजीको लागि दुबई र अबू धाबी भ्रमण गर्न सकेनन। त्यसोभए नौकरी खोजकर्ताहरूले रोजगारीका लागि आफ्नै देशबाट आवेदन गर्नेछन्। तर दुःखलाग्दो अमीरातमा आउन लागत यो ठूलो छ। कार्यकारी भारत र सऊदी अरब र कतारका क्यारियर चाहनेहरू प्रायः नौकरी खोजकर्ताहरूलाई उडान गर्न रोक्न। यी दिनहरू यसको सामना गरौं, दुबई शानदार व्यवसायिक निगमभन्दा बढी छ।
सबसे अधिक सम्भव प्रमाण कि नौकरी खोजकर्ताहरू हो अडब्बी मा नौकरिहरु को लागि हताश। क्या अबू धाबी हो र दुबई क्यारियर शुरू गर्न एकदम महँगो छ। जब तपाईं इमिरेट्समा क्यारियर सुरू गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ तपाईंसँग केही बचत हुन आवश्यक छ। र ठूलो भिन्नता त्यो लन्डन र पेरिसमा छ तपाइँ सजिलैसँग 1-3 महिना भित्र काम पाउन सक्नुहुन्छ। जे होस्, दुबई र अबु धाबीमा, यसले6महिना लिन सक्दछ।
2019 मा मध्य पूर्व रोजगार
मध्य पूर्वी क्यारियर रोजगारीको लागि ग्लैमर छ। र 2019 मा रोजगार को लागि यो लोकप्रिय हटस्पट। ती परिस्थितिहरूमा, तपाईं सधैं सक्नुहुनेछ एक अनलाइन नौकरी साइट संग दर्ता गर्नुहोस जस्तै दुबई कम्पनी जसले दुबईलाई आकर्षण गर्दछ सबै आगन्तुकहरूलाई वचन दिन्छ। मानिसहरू जो युएईमा आउँछन् रोजगारको जोखिम थाहा छैन।
स्थानीयहरूलाई थाहा छ कि तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ दुबईमा काम सुरु गर्नुहोस् भ्रमण भिसामा तर यो अवैध छ। जे भए पनि तपाईले कति पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ। जब तपाईं अबु धाबी आउनुहुन्छ यो पर्याप्त नहुन सक्छ। धेरै एक्सटेट्स विशाल कर्पोरेसनहरूको लागि एक गरीब विकल्प बन्नुहोस्। त्यसैले आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् र दुबई आउनु भन्दा पहिले आफैलाई बजारका लागि तयार गर्नुहोस्.
अग्रणी रोजगार पोर्टलहरू द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण अनुसार, प्रतिक्रिया को 45.5% मध्य पूर्वमा कम्पनीहरू। नयाँ उम्मेद्वारलाई बोलाउनु अघि जहिले पनि गहिरो अनुसन्धान गर्दै। भर्ती प्रबन्धकहरू सँधै सामाजिक प्रोफाइलहरूको खोजी गर्दछन् र काममा लिनु अघि नयाँ भाडा अनलाइन जाँच गर्दछन्। अब हामी दुबईमा जागिर भर्दैछौं त्यसैले आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस्।
केहि अवस्थामा मध्य पूर्वमा अमीरात भर्तीहरू अनलाइन रोजगार आवेदन फारामहरूको लागि अनुरोध गर्दै। सामान्यतया बोल्दै, लिंक्डिन र फेसबुक जाँच गर्ने संगठनहरूको पर्याप्त संख्या। अघिल्लो रोजगारदाता वेब ठेगाना पनि जाँच गर्दै। र सामाजिक मिडिया नेटवर्कमा र लिंक्डइन प्रोफाइलमा धेरै कम्पनीहरू सम्भव जानकारीको मूल्यांकन गर्नुहोस् हालको उम्मेद्वारको बारेमा।
लामो दौरानमा, तपाईको उम्मेदवारी निश्चित रूपमा जाँच गरिनेछ सबै भन्दा भर्खरको रोजगारदाताबाट सबै संदर्भको साथ, दिइएको काम र कम्पनीहरूको कर्पोरेट संस्कृति महत्त्वपूर्ण छ। उही समयमा, तपाईले युएईमा आफ्नो अनलाइन दृश्यता वृद्धि गर्न आवश्यक छ। ढिलो होस् वा पछि तपाइँको अनलाइन प्रतिष्ठा प्रबन्धन गर्ने प्रयास गर्दै तपाईंको अनन्य अनलाईन ब्रान्ड बनाउनुहोस् र सकारात्मक छविले तपाईंलाई नौकरी ल्याउँदछ.
2018 मा दुबई जॉब्स को लागि पुनः आरंभ गर्नुहोस्
त्यसैले तपाईंको समय बर्बाद नगर्नुहोस् र दुबई सिटी कम्पनीको पुन: सुरुवात अपलोड गर्नुहोस्। हामी भारतबाट जागिर खोज्ने, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UK, र कतर। यदि तपाईं खोजी गर्दै हुनुहुन्छ क्यारियर खोजीमा छिटो समाधानको लागि। दुबई सिटी कम्पनी तपाईका लागि उत्तम कम्पनी हो। हामी अब दुबईमा रोजगार भर्ती गर्दैछौं। हामी दुबईमा भर्ती गर्नेहरूसँग काम गर्दैछौं। अबु धाबीमा एचआर कम्पनीहरू हामी तपाईंको लागि रोजगार मद्दतको प्रबन्ध गर्न सक्दछौं। हालको समय सम्म, तपाईं दुबईमा हाम्रो कम्पनीमा पुनःसुरु पठाउन सक्नुहुनेछ।
तपाइँलाई पनि अपलोड गर्न आवश्यक छ दुबईमा अन्य नौकरी साइटहरूमा CV। त्यहाँ केहि शीर्ष साइटहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो पुनःसुरु व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सबै कोशिश गर्दैबाट नयाँ एक्सप्याट्स दुबईमा रोजगार पाउन। हाम्रो कम्पनीले सकेसम्म सहयोग गर्दै छ। उदाहरण को लागी, हामी हाम्रो वेबसाइट मा रोजगार प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छन्। यो हाम्रो द्वारा नौकरी खोजकर्ताहरु मोबाइल को प्रयोग गरेर एक नौकरी को लागी आवेदन गर्न को लागी। त्यसैले तपाईले आफ्नो कदम उठाउनु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्।
2018 र 2019 दुबई सिटी कम्पनीले प्रवृत्ति देख्न सक्छ दुबईका लागि फिलिपिन्सका लागि रोजगारी। यसैले यदि यस देशबाट हो तपाई निश्चित रूपमा हामीलाई रोजगार पाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो व्यवस्थापन टोलीले यी देशहरूको रोजगारीका मान्छे राख्दैछ। उदाहरणको लागि कृपया भर्ती कम्पनीहरू हेर्नुहोस्। यी दुबईमा क्यारियर साइट र यी रेटिङ पोर्टलको मूल्यवृद्धिको लागि। तिनीहरू दुवै साँच्चै तपाईंको पुन: सुरुको साथ आवेदन गर्न लायक छन्।
दुबई नौकरिहरु र पाकिस्तानी नौकरी तलाशने वालों
2018 र 2019 मा अधिकांश रोजगारी खोज्नेहरू युएईमा रोजगारी खोजी गर्दैछन्। तिनीहरू मध्ये कोही दुबई वा अबु धाबी आगन्तुकका रूपमा आउँदैछन्। त्यसैले आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् र रेजुमेलाई दुबई शहर कम्पनीमा अपलोड गर्नुहोस्। हाम्रो टोलीले संसार भर बाट नयाँ रोजगार खोज्नेहरुलाई सहयोग गरीरहेको छ दुबईमा जागिर पाउनुहोस्। तपाईंको लक्ष्य पुग्न मद्दत गर्नको लागि हाम्रो टोली सधै स्थानमा छ। कुनै कुरा हामी हामी हौ। हामी छौं भारतीय नौकरी खोज्ने, Pakistani expatriates, र दक्षिण अफ़्रीकी कैरियर शिकारीहरु संयुक्त अरब अमीरात मा एक खुश कर्मचारी हुन।
हाम्रो उद्देश्य हामीले जित्न सक्ने मानिसहरूको मद्दत गर्न हो। उदाहरणका लागि, पाकिस्तानी कर्मचारीहरूमध्ये एक हो संयुक्त अरब अमीरात मा सबै भन्दा ठूलो। उनीहरूलाई एमिरेट्स संस्कृतिको बारेमा धेरै थाहा छ, र उनीहरूको आफ्नै देशमा धेरै शैक्षिक संस्थानहरू छन्। उदाहरण को लागी, पाकिस्तान मा स्कूलहरू सबै छन् मुसलमानहरू र उनीहरूले युएइ जस्तो संस्कृति प्रबन्ध गरिरहेका छन्। हाम्रो टीम दैनिक सीवी को एक धेरै प्राप्त र दुबईमा कामका लागि भर्ना र भर्ती। अर्कोतर्फ बैंकिंग रिक्त पदहरू संयुक्त अरब अमीरातमा उत्कृष्ट लोकप्रिय छन्। विशेष गरी पाकिस्तानको मुनाफाको लागि तपाईं साँच्चै राम्रो जागिरको अवसर पाउन सक्नुहुन्छ।
पाकिस्तानका मानिसहरूका लागि अन्तिम शब्दहरु। हामी आफैलाई व्यवस्थापन गर्न कडा सल्लाह दिन्छौं दुबईमा होटल व्यवसायको अवसर पाउनुहोस्। यस प्रकारको क्यारियर आन्दोलनहरूको लागि धेरै ठाउँ छ। एक उदाहरण को रूप मा, तपाई को लागी धेरै होटलहरु पाउन सक्नुहुन्छ दुबई र अबु धाबीमा भाडामा लिदै। त्यसैले हेरिरहनुहोस् र को रूप मा तपाईं को लागी कुनै सम्भावना छोड्नुहोस् र अमीरातमा नयाँ जागिर खोज्ने.
दुबई बाट अन्तर्राष्ट्रिय भर्ती
त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायका लागि धेरै अफवाहहरू छन् जुन रोजगार खोज्दैछन्। उदाहरणका लागि निम्न वर्षहरूमा 2020 सम्म, सउदी अरब कम्पनीहरू उम्मेद्वारहरू भर्ती गर्दै छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबै काम खोज्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने, हामी महिला विदेशबाट दुबईको भर्ती गर्न मद्दत गर्दछौं। र अर्कोतर्फ, हामी दुबईबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि प्रबन्ध गर्दैछौँ।
हामी कसरी काम गरिरहेका छौं उदाहरणहरूको एक कार्य समूहहरू हो। तपाईं हाम्रो मा जागिर पाउन सक्नुहुन्छ खाडीमा एक्सट्याट्सका लागि गाईडहरू जहाँ तपाईं तपाईंको अपडेट गरिएको सीभी पोष्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा सिधा जडान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रोजगारी खोज्नेहरूका लागि धेरै विकल्पहरू केवल एक मानक तरिका भन्दा धेरै राम्रो हुन्छन्। यो दिमागमा राख्दै, हामीले धेरै भर्ती सिर्जना गरेका छौं उपकरणहरू जुन तपाईं यसलाई काम फेला पार्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईं संग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उल्लेख छैन जो लोग खाडी मा भर्ती संग कुरा गर्न को लागी देख रहे हो.
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको लिङ्कडेन प्रोफाइल साँच्चै राम्रो देखिन्छ। यदि तपाईं एमबीए संग रोजगारीको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंलाई आफ्नो शिक्षा मिति क्रमबद्ध गर्न आवश्यक छ। तपाईंको रिज्यूमलाई अचम्मको भन्दा बढी हेर्न आवश्यक छ। तपाईंको रोजगारी विवरणहरू बेग्लै देखिन्छ।
दुबई शहर कैरियर शिकारीहरुको लागि स्थान हो
ठीक छ, तपाईं दुबईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अब एक समय हो र खोज्नु किन समय हो। यो स्थानको शर्तमा सबै भन्दा राम्रो छ काम गर्ने अनुभव र सांस्कृतिक जीवन बिताउने। प्रसिद्ध मार्केटिंग नौकरी रिक्तिहरू अब एक्सटेट्सका लागि खुला छन्। यो कुराको साथमा, तपाईंसँग आफ्नो टाउकोमा पहेंलो चन्द्रमा खुल्नु पर्छ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई थाहा छ किन दुबई काम गर्ने सबैभन्दा राम्रो स्थान हो। यो मात्र कर-मुक्त छैन। तर क्यारियर विकासको लागि ठूला विकल्पहरू भएका। वास्तवमा, हामी छौं गत बर्षमा 20 हजार नयाँ रोजगारी खोज्नेहरू राख्ने। यो सबै सम्भव छ किनकि हामी सुपर व्यापक सामाजिक मिडिया अभियान प्रयोग गर्दैछौं। नयाँ आगन्तुकहरू युएईमा विश्वभरि सर्दै। उदाहरण को लागी, दक्षिण अफ्रीकाबाट कामका लागि आगन्तुक निश्चित रूपमा संयुक्त अरब अमीरातमा रोजगारी पाइरहेका छन्।
यो भारतीयहरुको लागि दबाइमा हिड-इन साक्षात्कार Expat को लागी सँधै खुला रहन्छ। किनकि संयुक्त अरब अमीरातको राजधानी सँधै भाँडामा लिन्छ। यस कारणका लागि, हाम्रो कम्पनी उत्पन्न कसरी काम पत्ता लगाउने बारेमा धेरै रिपोर्टहरू। उदाहरण को लागी, हाम्रो टीम मा मा एक गाइड प्रदान गर्दछ कसरी दुबईमा गुगलको साथ एक नौकरी खोज्न। त्यसैले आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् र युएईमा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पाउनुहोस्.
दुबई शहरको करियर!
एक खोज्नुहोस् दुबईमा काम अचम्मको कुरा तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ। बस एक सुरुवात गर्नुहोस् नयाँ क्यारियर दुबई!
पुन: सुरु गर्नुहोस् सबैभन्दा छिटो पृथ्वीमा बढ्दो शहर! - दुबई सिटी कम्पनी
क्रेडिट Instagram: https://www.instagram.com/hhshkmohd
दुबई शहर कम्पनी अब राम्रो प्रदान गर्दै दुबई मा रोजगार को लागी मार्गदर्शन। हाम्रो टोलीले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको जानकारी थप्न निर्णय गर्यो Dubai दुबई। त्यसोभए यो कुरामा तपाईले संयुक्त अरब अमीरातमा आफ्नै भाषाको साथमा गाइडहरू, सुझावहरू र रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ।